Azụmaahịa Gị Ọ Dị n’etiti Onye Ahịa na Ihe Ha Chọrọ? | Martech Zone
Azụmaahịa Gị Ọ Dị n’etiti Onye Ahịa na Ihe Ha Chọrọ?
Monday, August 26, 2013 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 25, 2013 Douglas Karr
M na-agụ a post na Isi ihe 10 kpatara ụlọ ọrụ egwu na-akụ afọ n’ala, kwadoro site na ụlọ ọrụ enyi Steve Gerardi. Agbanyeghi na ekwenyeghi m na ihe obula edemede ahu kwuru, ekwere m na enwere ike ichikota ya n’otu ihe.
Egwu ahụ ụlọ ọrụ gbochie uzo n'etiti ndi ozo na talent ka ha wee mee ya ego. Ọ bụrụ na otu egwu chọrọ ịchọpụta, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu ịnwa ịnwe mmepụta, ihe nkiri ikuku, nkesa, yana ndị na-akwado ya nwere ike ịme njem egwu. Y’oburu n’inwe ndi nwere mmasi na ndi n’alusi oru ike, odighi ihe ozo kariri igba mbo ichoputa n’ime ulo oru. Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ mmadụ ji ahapụ CD ngosi na-apụ ma na-agagharị na mgbasa ozi mmekọrịta iji nweta ihe na-eto eto ma na-eto eto ha. Enwere ohere ka mma na ha nwere ike ịga nke ọma na enweghị ụlọ ọrụ ahụ.
Ọganihu na nkà na ụzụ na-emeri mgbe niile ụlọ ọrụ ndị gbochiri ụzọ:
Okporo ụzọ, ụgbọ ala, na injin na-ere ọkụ nwere ike ibu njem ngwa ngwa, dị mfe karịa ụgbọ oloko na onye nchịkwa.
Ozi ejirila email dochie anya akwụkwọ ozi.
Ejirila ngwa ahia azụmaahịa na nnyefe abali eji dochie ebe a na-adọba ụgbọala na ịzụ ahịa ndị na-ere ahịa na-arụsi ọrụ ike.
Gingde blọgụ, mmelite Twitter na Youtube na-enye ngwa ngwa, ụzọ dị mfe iji nweta ozi na mmelite dị mkpa karịa akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ.
Voice over IP na ekwentị mkpanaaka na-anọchi ekwentị na azụmahịa ekwentị.
Sọftụwia dị ka Ọrụ na-edochi sọftụwia nwere ike itinye. Ọ na-agba ọsọ na sava dị ike karị, ma ọ dị mfe ijikwa ma kesaa.
Mgbe ohere maka ụlọ ọrụ egwu na-eme mgbanwe, ha họọrọ ịlụ ọgụ kama. Nke a kwupụtara mbibi… na-awakpo ndị Fans ahụ na-echekwa dollar ikpeazụ ha maka egwu egwu ma ọ bụ CD ọzọ. Kama ịchọta usoro dị irè karị maka ịchọta na ikesa egwu na ndị na-agba egwu, na ijikọ ndị fan na ndị otu kachasị amasị ha, ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị ịkwụsị ọbara ọgbụgba ahụ ma mee ka uru ahụ dịkwuo ogologo.
N'ihe atụ niile dị n'elu, ndị isi ahọpụtara na ụlọ ọrụ ahụ elegharaghị ohere iji mebie ụzọ. Mgbe m na-arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ, anyị niile nọ na-ele ka Ebay na Craigslist na-apụ apụ. Kama itinye ego 40% uru, ndị na-ahụ maka mgbasa ozi kama ịhọrọ ego ego.
Gbọ oloko anaghịzi arụ ọrụ na nzuzo ma dabere na enyemaka gọọmentị iji mee ihe. N'otu oge ahụ, gọọmentị na-etinye ego na okporo ụzọ sara mbara na nnukwu àkwà mmiri… na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnọgide na-anya ụgbọ ala anyị.
USPS kwalitere ọrụ ya n'ịntanetị, na-akwụ ụgwọ ụgwọ kwa ọnwa yana otu ihe iji bipụta stampụ na ngwa nbipute gị. Ọ dịghị mfe… ụdị ogbi.
Ndị na-ere ahịa ugbu a na-abanye maka ụtụ isi nke azụmahịa n'ịntanetị iji mee ka ihe 'dị mma' Kama ime ka ngwa ahịa ha kesaa ngwa ngwa n'ịntanetị, ha na-alụ ọgụ iji kpuchido ahịhịa ha.
Ndi oru nta akuko nọgidere na-agbahapụ uru ha wetara ma bụrụzị naanị ụlọ ọrụ TMZ nwere aha nwere njikọ njikọta ma jiri ọtụtụ mgbasa ozi jikọtara ya. Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa na-azụta ọdịnaya dị mkpa karị, akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu na-achịkwa arụmọrụ yana kesaa ọdịnaya a rụpụtara nke na-adịchaghị mkpa.
Ekwentị na-agbanye ọkụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, na-ebelata ego iji bulie ọnụahịa, ma emelitebeghị netwọkụ ha ma ọ bụ teknụzụ. Naanị anyị na-agbanyụ ha ma jiri ekwentị anyị ugbu a maka ihe niile.
A na-eji sọftụwia ndị pere mpe, nke na-esighi ike, ngwa mkpanaaka na igwe ojii dochie anya ha. Ọzọkwa, kama itinyeghachi uru, ụlọ ọrụ ochie na-etinye nrụgide ahịa karịa. Ihe a na-apụghị izere ezere ga-eme.
Osooso nke teknụzụ na-aga n'ihu na-enyere aka na nke a. Naanị n'ime ụlọ ọrụ egwu, enwere m ịtụnanya na ngwa dịka Bandsintown, Hoda ụda, Ntughari na Spotify. Ejikọtara ya na Twitter, Facebook na Youtube - Apụrụ m ịchọpụta, chọta, lelee, soro ma mee ka m mata mgbe egwu m masịrị m na-abịa n’obodo. Imirikiti ngwa ndị a anaghị eri otu dime. Ihe kachasị mma bụ na m nwere ike ịga hụ ụlọ ọrụ ahụ wee mefuo ego m na nnukwu tiketi na ngwa ahịa… nke na-eritekarị uru karịa karịa ire CD!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka azụmahịa gị ghara ịlanarị, kama ka ọ na-eto nke ọma, ị ga-ewepụ ihe mgbochi dị n’etiti ndị ahịa ị na - ejere ozi na nsonaazụ ha na - achọ inweta. Ma ị bụ teknụzụ ahịa na-enweghị atụmatụ, ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa nke na-ele asọmpi ahụ na-ekere òkè n'ahịa. Ọ bụghị ihe niile gbasara ego… ọtụtụ mmadụ ga-akwụkwu ụgwọ mgbe ha matara na ha nwere ike ime ihe ọsịsọ ma dịkwa nfe. Ọ bụrụ na ha agaghị emeli gị, ha na onye ọzọ ga-eme ya.